Herisetra :: Lehilahy lehibe naratra mafy nodarohina telo lahy • AoRaha
Herisetra Lehilahy lehibe naratra mafy nodarohina telo lahy
Naratra mafy ny lehilahy lehibe iray noho ny vono sy daroka nahazo azy. Nandeha hariva teny Andraharo izy, afak’omaly, tokony ho tamin’ny fito ora, no nifanena tamina lehilahy telo. Nanao tambabe nikasi-tanana azy izy telo lahy.
Saika zava-doza na nivadika zavatra hafa ny nahazo an’ity zokiolona ity raha tsy voavonjin’ny mpitandro filaminana. Tazan’ny polisy nanao fisafoana teny amin’ny manodidina ny lehilahy telo niara-nidaroka azy. Nihazakazaka namonjy an’ilay rangahy lehibe ireo mpitandro filaminana. Nirifatra nandositra kosa izy telo lahy ka nifanenjahana. Voasambotra ny iray tamin’izy ireo.
Ilay zokiolona tetsy an-daniny naratra mafy. Voalaza fa vaky ny lohany sy ny orony, nihoson-dra ny tarehiny. Nalaina am-bavany teny amin’ny biraon’ny Kaomisarian’ny polisy teny Ambohimanarina ilay voasambotra. Nambarany tamin’izany fa saika hanendaka an’ilay zokiolona izy sy ny namany no izao tra-tehaka izao.
Fahamaizana teny Ivato :: Nirehitra ny orinasa iray mpanao labozia
Dobo an-drano :: Vehivavy iray namoy ny ainy tetsy Ikopa